İzmir Alsancak ဆိပ်ကမ်းအထိုင်တင်ဒါကိုမနက်ဖြန်ကျင်းပသည် - RayHaber
[10 / 10 / 2019] TCDD နှင့်DHMİ ၀ န်ထမ်းများအတွက်ကျန်းမာရေးအာမခံထပ်မံတောင်းဆို	06 တူရကီ
[10 / 10 / 2019] Ankara Metro Stations ရှိကျောင်းသားများအတွက် Hot Soup	06 တူရကီ
[10 / 10 / 2019]2ပေါင်းထောင်နှင့်ချီသောသူများသည် Istanbul လေဆိပ်တွင်စာဖတ်သူများနှင့်တွေ့ဆုံမည်	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[10 / 10 / 2019] TÜDEMSAŞ ၀ န်ထမ်းများသည် Bozkurt စက်ခေါင်းရှေ့တွင်အောင်ပွဲခံရန်ဆုတောင်းပါသည်	58 Sivas
[10 / 10 / 2019] 17 ဘီလီယံ Lira	06 တူရကီ
[10 / 10 / 2019] Uygun: ရထားလမ်းအသစ်အတွက်ပြင်ဆင်မှုများတိုးတက်နေပြီ	06 တူရကီ
[10 / 10 / 2019] Kütahyaတွင်ရထားမတော်တဆမှု! .. 1 ပြင်းထန်သော2ပုဂ္ဂိုလ်ဒဏ်ရာရသည်	43 Kutahya
[10 / 10 / 2019] Country Country Icon စီမံကိန်းများ	86 တရုတ်
[10 / 10 / 2019] ဆင်ခြေဖုံးလှည်းKöseköyအတွက် Destiny မှစွန့်ပစ်	41 Kocaeli
[10 / 10 / 2019] 2020 ၌အသစ်သော YHT သတ်မှတ်ချက်များဖြင့် YHT လေ့လာရေးခရီးများ	06 တူရကီ
Homeတူရကီတူရကီ Aegean ကမ်းခြေ35 IzmirIzmir Alsancak ဆိပ်ကမ်းဆိပ်ကမ်းဆီမနက်ဖြန်လေလံတင်ရောင်းချပြုသောအမှု
Izmir Alsancak ဆိပ်ကမ်းဆိပ်ကမ်းဆီမနက်ဖြန်လေလံတင်ရောင်းချပြုသောအမှု
29 / 09 / 2014 Levent Ozen 35 Izmir, အထွေထွေ, Institute, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ, TCDD 0
လေလံတင်ရောင်းချ Izmir Alsancak ဆိပ်ကမ်းဆိပ်ကမ်းဆီမနက်ဖြန်ပြုမိ: Izmir Alsancak ဆိပ်ကမ်း Ro-Ro သင်္ဘောစီးတံတားတင်ဒါမှာ berthed နိုင်ပါတယ် TCDD Izmir Alsancak ဆိပ်ကမ်းစစ်ဆင်ရေးညွှန်ကြားမှုမှာကျင်းပပါလိမ့်မည်မနက်ဖြန်ကျင်းပပါလိမ့်မည်။
အသစ်ကသတ်မှတ်ချက်များအသစ်တစ်ခုကိုနူးညံ့၏သင့်လျော်သောအုပ်ချုပ်ရေးသတ်မှတ်ချက်များမရှိခြင်းကြောင့်ဖျက်သိမ်းခြင်းအောက်ပါပွငျဆငျနှင့်အတူ Izmir Alsancak ဆိပ်ကမ်း Ro-Ro သင်္ဘောများကိုလည်းအထိုင်တွင်စိုက်ရန်နု dock ကိုဖွင့်လှစ်။
တင်ဒါအသစ်အတွက်သတ်မှတ်ချက်မနက်ဖြန် (စက်တင်ဘာ 30) ကျင်းပလိမ့်မည်နှင့်အတူ TCDD ၏ Izmir Alsancak ဆိပ်ကမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုညွှန်ကြားမှုတှငျကငျြးပခဲ့ပါလိမ့်မည်။ ဒါဟာဆိပ်ကမ်း Izmir Ro-Ro တန်ဆာနူးညံ့သောကမ်းလှမ်းမှုမှာဆိုက်ကပ်ရန်စီစဉ်ထားသည်။
တူရကီပြည်နယ်မီးရထား၏ဤအခြေအနေတွင်ပြီးခဲ့သည့်လကစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး Izmir ကုန်သည်ကြီးများအသင်းများတွင်သင်္ဘော Izmir ဘဏ်ခွဲကုန်သည်ကြီးများအသင်း, Izmir Alsancak ဆိပ်ကမ်းညွှန်ကြားမှု, ပို့ဆောင်ရေး3။ အစ်ဂျီးယန်းအမှုဆောင်အရာရှိ၏အကောက်ခွန်နှင့်ကုန်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုအစည်းအဝေးတစ်ခုကျင်းပနှင့် Ro-Ro ဆိပ်ကမ်းကို ro-pax တန်ဆာများကိုဆိုက်ရောက်အပေါ်တစ်ဦးသဘောတူညီမှုရောက်ရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါထရပ်ကားများနှင့်ခရီးသည်တင်ကားများနှင့်အတူ ro-ro သင်္ဘောများအတူတကွပြောင်းရွေ့ခံရဖို့မျှော်လင့်ရသည်။
Alsancak ဆိပ်ကမ်း Ro-Ro ရေယာဉ်များအတွက်တင်ဒါအထိုင်ဖျက်သိမ်း 17 / 09 / 2014 ro-ro ရေယာဉ်များအတွက် Alsancak ဆိပ်ကမ်းမှာအထိုင်များနှင့်တင်ဒါဖျက်သိမ်းခံခဲ့ရသည်: ro-ro ရေယာဉ်များ TCDD ၏ဆိုက်ကပ်များအတွက်ဆိပ်ခံတံတားစေရန် Izmir Alsancak ၏ဆိပ်ကမ်း, နုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ သို့သော်တင်ဒါကြောင့်စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကိုမရှိခြင်းကိုဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။ Izmir Alsancak ဆိပ်ကမ်း Ro-Ro သင်္ဘောများမှာလည်းဆိုက်ဖို့စီစဉ်ထားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအထိုင်အတွက်တင်ဒါကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။ နု၏စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကိုမရရှိနိုင်၏မြေပြင်ပေါ်တွင်ဖျက်သိမ်းပြီသတင်းပို့ခဲ့ကြသည်။ TCDD နှောင်းပိုင်းတွင်ပြီးခဲ့သည့်လက Dock ရဲ့ status ကိုဆုံးဖြတ်ရန်, ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့်အသစ်သော Dock ရဲ့ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်တင်ဒါဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မည်။ Dock ရဲ့နူးညံ့အမှတ်လုံ့လဝီရိယအောက်မှာ Alsancak ဆိပ်ကမ်းအတွက်ရရှိနိုင်သြဂုတ်လ620-22 ဖွင့်လှစ်ပါက 10-19 အမှတ် Dock ရဲ့ဘာသာပြန်မျှော်မှန်း ... ။
တရုတ်ဝူဟန်ဆိပ်ကမ်းအခုတော့ညီနောင်များ (ဓာတ်ပုံပြခန်း) နဲ့ Izmir Alsancak ဆိပ်ကမ်း 12 / 06 / 2013 İzmirအခုတော့ညီအစ်မညီအစ်မဆိပ်ကမ်းသဘောတူညီချက်၏ Izmir Alsancak ဆိပ်ကမ်းတရုတ်နိုင်ငံဝူဟန်ဆိပ်ကမ်း Alsancak ဆိပ်ကမ်းတရုတ်နိုင်ငံဝူဟန်ဆိပ်ကမ်းအကြားလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။ ဇွန်လအတွင်းကဆိုပါတယ်သဘောတူညီချက်62013 ကြာသပတေးနေ့, ဝူဟန် Zhang ကလင်းနှင့် Izmir ဆိပ်ကမ်းစီမံခန့်ခွဲရေးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး Birol Bafra များ၏ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၏ Chairman တို့ကဝူဟန်၏ Izmir မြို့တော်ဝန်မှလာမယ့်အတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ ကို Tang Liangzhu လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနားရှေ့တော်၌မိမိအတိုမိန့်ခွန်းမှာဧည့်ဝူဟန်မြို့တော်ဝန်, နှစ်ဦးစလုံးလူထုအဓိကအားဖြင့်အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များနှင့်မဟာဗျူဟာများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့စွမ်းရည်များအတွက်အသိပညာ၎င်းတို့၏စုဆောင်းခြင်းထံမှထွက်ပေါ်လာသောကုန်သွယ်မှုလွယ်ကူချောမွေ့နိုင်ရန်အတွက်ဆိပ်ကမ်းများအကြားနှင့်ရေကြောင်းန်ဆောင်မှုများ၏လယ်ပြင်တွင်သဘောတူညီခဲ့ ...
Izmir ဆိပ်ကမ်းကမ်းနားနုအကောင်အထည်ဖော်ရေးစီမံကိန်းဖျက်သိမ်းခဲ့သည် 18 / 09 / 2014 Izmir ဆိပ်ကမ်းနု Piers လျှောက်လွှာ Project မှမပယ်ဖျက်ခံခဲ့ရသည်: အကမ်းနားအကောင်အထည်ဖော်ရေးစီမံကိန်းတင်ဒါ၏ဖျက်သိမ်းခြင်းအဖြစ်တူရကီပြည်နယ်မီးရထားသမ္မတနိုင်ငံ (TCDD), Izmir ဆိပ်ကမ်း၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှု, သတင်းများအရ 30 စက်တင်ဘာလ 2014 ရွှေ့ဆိုင်း။ TCDD ဖွငျ့ရေးသားထားသောကြေညာချက်မှာနောက်ဆုံးနှစ်ရက်သောသတင်းအချို့အဘို့အ Izmir စာနယ်ဇင်းအတွက်နေရာတစ်နေရာယူဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက်တင်ဒါများဖျက်သိမ်းခြင်းကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။ နု၏ဖျက်သိမ်းခြင်း, သတင်းများအရတော်မကိုစက်တင်ဘာ 30 မှရွှေ့ဆိုင်းကြေညာချက်ကတင်ဒါလျှောက်လွှာစီမံကိန်းကိုကြောင်းအလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်ခဲ့သည်။ ကြေညာချက်ထဲမှာ, နူးညံ့သောဘာသာရပ်ဆိုက်ကပ်မှုကြောင့်လုံ့လဝီရိယ၏, Izmir ဆိပ်ကမ်း 20-22 နံပါတ်, 10-19 ၏ရွှေ့ပြောင်းခံရသည့် Piers, အ 127 450 မီတာမီတာ ro-ro အိပ်စင်တွေနဲ့ဆိပ်ကမ်းဆီအကောင်အထည်ဖော်ရေးစီမံကိန်းအတွက်ဖြစ်ပါတယ် ...
TCDD3။ လခြမ်းဧရိယာ - Denizli လိုင်း Alsancak - Tekatan လက်ဝါးကပ်တိုင်နှင့် Alsancak များ - အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်ရထားလမ်း superstructure နူးညံ့၏တိုးတက်မှု၏Halkapınar Musella စီမံကိန်းဆောက်လုပ်ရေး 21 / 05 / 2012 TCDD3။ လခြမ်းဧရိယာ - Denizli လိုင်း Alsancak - Tekatan လက်ဝါးကပ်တိုင်နှင့် Alsancak များ - ရထားလမ်း superstructure ဆောက်လုပ်ရေးတင်ဒါ၏အဆုံးအဘို့အHalkapınar Musella အခြေခံအဆောက်အအုံတိုးတက်မှုစီမံကိန်းနှင့်လေလံဆွဲသည့်ရက်စွဲဇွန်လ 05 2012 ၏အဖြစ်ကြေညာခဲ့သည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တူရကီပြည်နယ်မီးရထား (TCDD)3။ "သင်၏ဆောက်လုပ်ရေး Musella အတွက်Halkapınarအခြေခံအဆောက်အအုံတိုးတက်မှုနှင့်ရထားလမ်း superstructure - Denizli လိုင်း Alsancak - - Tekatan လက်ဝါးကပ်တိုင်နှင့် Alsancak ၏ Hilal" မေလ 10 ရက်စွဲပါပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအာဏာပိုင် (PPA) တွင်တင်ဒါများအတွက် 2012 ကြော်ငြာတွေဟာသတင်းလွှာထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ များသောညွှန်ကြားမှု, ကျင်းပလိမ့်မည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဂ္ဂဇင်းလက်ခံရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ, နု 05 2012 ဇွန်လများအတွက်နောက်ဆုံးလေလံရက်စွဲကိုပြောကြားခဲ့့သည်က ...
TCDD3။ လခြမ်းဧရိယာ - Denizli လိုင်း Alsancak - Tekatan လက်ဝါးကပ်တိုင်နှင့် Alsancak များ - Halkapınar Musella စီမံကိန်းအခြေခံအဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ရထားလမ်း superstructure နူးညံ့၏တိုးတက်မှုရလဒ် 19 / 07 / 2012 တူရကီပြည်နယ်မီးရထား (TCDD)3။ စုဆောင်းဇွန်လ 05 2012 တစ်ရက်ပြုသောပူဇော်သက္ကာထဲကဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု, "Hilal-Denizli-Tekatan လူငယ်များသို့လိုင်း Alsancak နှင့် Alsancak - မီးရထား superstructure ၏အခြေခံအဆောက်အအုံတိုးတက်မှုနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်Halkapınar Musella menu ကိုနေကြပါတယ်" တင်ဒါရလဒ်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဂ္ဂဇင်းလက်ခံရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ, နုအနိုင်ရkasarcıမျှော်မှန်းချက်။ ဆောင်းပါးဖတ်ရှုဖို့ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါကျေးဇူးပြုပြီးဆက်လက်: ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရင်းမြစ်: Investments
14: အောက်တိုဘာလ 10 00 @ - 11: 00
15: အောက်တိုဘာလ 10 00 @ - 11: 00
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Zonguldak မြစ်လိုင်းမိုင်အကွာအဝေး: အလုပ်ခြင်းအတွက် 166 900 + ရထားလမ်းဉမင်လိုဏ်ခေါင်းတံတား
15: အောက်တိုဘာလ 10 30 @ - 11: 30
Ozen အကြောင်းကို Levent
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း, မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်းကဏ္ဍကြီးထွားလာတူရကီအတွက်ဥရောပခေါင်းဆောင်။ ဒီနှုန်းသည်အတွက်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားများမီးရထားလမ်းလယ်ပြင်၌ရှိသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမြင့်တက်နေဆဲဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, အတူတကွရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့်အတူပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှုအတွက်စေ့စပ်ကုမ္ပဏီအများအပြား၏ကြယ်ပွင့်ထွန်းလင်း, မြို့ပြသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ကုမ္ပဏီများမှထုတ်လုပ်သောမော်တော်ယာဉ်မှလာမယ့် native လမ်းရထား, အလင်းရထားလမ်းနှင့်မြေအောက်ရထား, တာကလုပ်မြန်နှုန်းမြင့် "အမျိုးသားရေးရထား" ထုတ်လုပ်ရန်စတင်ပါပြီဂုဏ်ယူသည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုဒီ table ထဲမှာဖြစ်ခြင်း၏မာနထောင်လွှားအတော်လေးပျော်ရွှင်ကြသည်။
ဝက်ဘ်ဆိုက် Facebook က Instagram ကို တွစ်တာ Google+ မှာ သငျသညျTube LinkedIn တို့
TCDD နှင့်DHMİ ၀ န်ထမ်းများအတွက်ကျန်းမာရေးအာမခံထပ်မံတောင်းဆို
Ankara Metro Stations ရှိကျောင်းသားများအတွက် Hot Soup
Kütahyaတွင်ရထားမတော်တဆမှု! .. 1 ပြင်းထန်သော2ပုဂ္ဂိုလ်ဒဏ်ရာရသည်
RayHaber 10.10.2019 ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတင်းလွှာ
ဆင်ခြေဖုံးလှည်းKöseköyအတွက် Destiny မှစွန့်ပစ်
2020 ၌အသစ်သော YHT သတ်မှတ်ချက်များဖြင့် YHT လေ့လာရေးခရီးများ
မတူညီသောလိုင်းများမှ Gebze နည်းပညာတက္ကသိုလ်သို့အလွယ်တကူဝင်ရောက်နိုင်သည်
Karamürselရှိ Mobile Office Caravan
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦး သိန်းစိန် MAKTEK Izmir Fair ၏ဖွင့်ပွဲသို့တက်ရောက်ခဲ့သည်
7 ထောင်နှင့်ချီသော ၀ န်ထမ်းများသည်အနာဂတ်အတွက်ထုတ်လုပ်မှု၏အနာဂတ်ကိုပုံဖော်သည့်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးများသို့သွားရောက်ခဲ့သည်
FESPA Eurasia 2019 သည် Istanbul တွင် Eurasia နှင့်တွေ့ဆုံမည်
ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက်: အောက်တိုဘာလ 10 2016 အဆိုပါ Kartal-Pendik-Tavşantepe Metro ...
တူရကီနေယူရိုသန်းပေါင်းများစွာနှင့်အတူဒေသခံတိုင်းရင်းသားများ Traction Transformer
TÜDEMSA၏အရည်အသွေး၊ ပတ်ဝန်းကျင်၊ စွမ်းအင်နှင့် OHS စီမံခန့်ခွဲမှုအောင်မြင်ခဲ့သည်။
Sivas Demirspor ကလပ်ရာသီသစ်ဖွင့်လှစ်
Change Transformation Works Altınkayı Boulevard မှစတင်သည်။
Bursa Ankara မြန်နှုန်းမြင့်ရထားစီမံကိန်းဘာဖြစ်ခဲ့တာလဲ .. ..
10: အောက်တိုဘာလ 10 00 @ - 11: 00
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: TCDD Led ဆီမီးပစ္စည်းဝယ်ယူရေး
10: အောက်တိုဘာလ 14 00 @ - 15: 00
တင်ဒါကြေငြာချက် - ငလျင်အန္တရာယ်တွက်ချက်မှုများနှင့် Erzincan ဘူတာရှိအိမ်ခြံမြေရောင်းဝယ်မှုအတွက်အတည်ပြုအစီရင်ခံစာများကိုပြင်ဆင်ခြင်း
15: အောက်တိုဘာလ 14 00 @ - 15: 00
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: TCDD İzmirဆိပ်ကမ်းအတွက်ကမ်းနား၏စီးပွားရေးဖော်ဆောင်ရေးနှင့်ပြန်လှသင်တန်းကိုဖြည့်
16: အောက်တိုဘာလ 10 00 @ - 11: 00
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အဆိုပါ TCDD İzmirဆိပ်ကမ်းကမ်းနား၏လုပ်ခြင်းနှင့်ပြန်လှသင်တန်းကိုဖြည့်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးတုရု၏လျှပ်စစ်ဓာတ်အားနှင့် signal စနစ်များ Alignment အတွက်Ödemişဘူတာလမ်းမကြီး
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Ulukışla-Yenice ဘူတာအမှတ် 37 အဆိုပါဥမင်လိုဏ်ခေါင်း၏အားကောင်းလာအကြားတွေ့
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Haydarpasa တူရကီလိုင်းမိုင်အကွာအဝေး: + 392 742 - 395 700 + လက်ဝါးကပ်တိုင် Slope စီစဉ်
16: အောက်တိုဘာလ 10 30 @ - 11: 30
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: TCDD သန့်ရှင်းရေးန်ဆောင်မှုများဝယ်ယူရေး
16: အောက်တိုဘာလ 14 30 @ - 15: 00
ဓါတ်ရထားဘူတာ Tourniquets Advertising ကြော်ငြာအာကာသကုမ္ပဏီတင်ဒါ Kayserili လက်ခံတွေ့ဆုံ
တင်ဒါရလဒ်ပြုလုပ်ခြင်း Nazilli လမ်းသွားလမ်းလာဉမင်လိုဏ်ခေါင်းမှစက်လှေကားနဲ့ဓါတ်လှေကား
Diyarbakir Kurtalan လိုင်းလမ်းမကြီးများတွင်ဉမင်လိုဏ်ခေါင်းလုပ်ငန်းတင်ဒါရလဒ် Making
တင်ဒါရလဒ်များ၏Biçerovဘူတာအဆောက်အအုံနှင့် Menemen ဘူတာအဆောက်အအုံမြေညီထပ်ပြုပြင်ရေးလုပ်ခြင်း
Alsancak ဆိပ်ကမ်း Ro-Ro ရေယာဉ်များအတွက်တင်ဒါအထိုင်ဖျက်သိမ်း
တရုတ်ဝူဟန်ဆိပ်ကမ်းအခုတော့ညီနောင်များ (ဓာတ်ပုံပြခန်း) နဲ့ Izmir Alsancak ဆိပ်ကမ်း
TCDD3။ လခြမ်းဧရိယာ - Denizli လိုင်း Alsancak - Tekatan လက်ဝါးကပ်တိုင်နှင့် Alsancak များ - အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်ရထားလမ်း superstructure နူးညံ့၏တိုးတက်မှု၏Halkapınar Musella စီမံကိန်းဆောက်လုပ်ရေး
TCDD3။ လခြမ်းဧရိယာ - Denizli လိုင်း Alsancak - Tekatan လက်ဝါးကပ်တိုင်နှင့် Alsancak များ - Halkapınar Musella စီမံကိန်းအခြေခံအဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ရထားလမ်း superstructure နူးညံ့၏တိုးတက်မှုရလဒ်
Izmir ဆိပ်ကမ်း Piers ၏ Stocktaking - စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးစီမံကိန်းအတွက်ကန်ထရိုက်ကုမ္ပဏီတင်ဒါအနိုင်ရနှင့်အတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်အောင်မှပြောင်းရွှေ့
Izmir ဆိပ်ကမ်း Piers ၏ Stocktaking - နု၏စီမံကိန်းအဆိုပြုလွှာ၏လမ်းကြောင်းစုဆောင်းခဲ့ကြ
TCDD Derince ဆိပ်ကမ်းကမ်းနား၏အမှတ် 3, အကာအရံများနှင့်လင်းပိုင်တင်ဒါကောက်ချက်ချ Making
TCDD3။ လခြမ်းဧရိယာ - Denizli လိုင်း Alsancak - Tekatan လက်ဝါးကပ်တိုင်နှင့် Alsancak များ - Halkapınar Musella စီမံကိန်းအခြေခံအဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ရထားလမ်း superstructure နူးညံ့သောတဏှာ၏တိုးတက်မှုkasarcıအနိုင်ရ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: (Derince ၏ Piers ဆိပ်ကမ်းကိုတင်သောအခါ) Active ကိုပိုက်ပြင်ပိုက်မီး၏အလုပ် Making
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: အောက်တိုဘာလ 8 1938 တူရကီ-Sivas-Erzurum လိုင်း
ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက်: အောက်တိုဘာလ51908 ဘူလ်ဂေးရီးယားက၎င်း၏လွတ်လပ်ရေးကြေငြာ ...
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: အောက်တိုဘာလ41872 Haydarpasa-Izmit ရထားလမ်း
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ အောက်တိုဘာလ 2019 (174) စက်တင်ဘာလ 2019 (555) သြဂုတ်လ 2019 (508) ဇူလိုင်လ 2019 (634) ဇွန်လ 2019 (504) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (542) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1077) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (972) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (548) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (906) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1168) အောက်တိုဘာလ 2012 (830) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (974) ဇူလိုင်လ 2012 (863) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (563) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (12) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)
ကို 'နောက်ဆုံးရေနွေးငွေ့' 'ပြပွဲဖွင့်လှစ်အတွက်နေ့စွဲ Alsancak ဘူတာ
TCDD 163 ။ နှစ်မြောက် Afyonkarahisar အတွက်ထက်ထက်သန်သန်ကျင်းပပြီးစီး
တူရကီမီးရထားဘူတာရုံxnumx.yıl Enthusiasm နဲ့ခုနှစ်တွင်
သတို့သမီး Sivas, တူရကီ YHT လိုင်းအတွက်နောက်ဆုံးခဲ့သည်
သုံးအတွက်တဦးတည်းအားပေးပြီးမှပါရမီ၏ DCH တံတားယာဉ်အာမခံရောက်ရှိမရနိုင်ခြင်း
Sharp က: လေကြောင်းတူရကီရဲ့မကျြနှာကို flux အဖြစ် '' စက်မှုဝန်ကြီးဦးစီး '' ရှိနေဆဲ
ယခုနှစ် 50 DHL Express ကိုလေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍ၏တည်ထောင်သူ
Bursa မြန်ရထားရပ်တန့်ဖို့ site ကို, အဝေးမှမျှော်ပေါ်နေဖို့လာ